Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo nekukhibika Leningrad esifundeni?
Petersburg abahlali, njengoba ngempela. kanye nezakhamuzi neminye imizi emikhulu efana okungenani isikhathi ukuya emaphandleni futhi bahlaba ikhefu phakathi umsindo ezinomsindo befuna futhi abantu abaningi. Namuhla sekuwumkhuba travel ethandwa ku ubunjalo ngempelasonto. Ukuze wenze lokhu, irenti ka Cottages ukhululekile, ungaya kuphi nabangani noma kuwo wonke umkhaya.
Ngo-Leningrad futhi Pskov izifunda ukuphumula ezinjalo inikezwa ogwini lweLake Peipsi. The enhle ngaphezulu kulezi zindawo? Kuyinto ephawulekayo ngokwanele ukuthi endaweni ingqikithi echibini ingaphezu emithathu nengxenye ayizinkulungwane amakhilomitha square. Akumangazi-ke ukuthi ichibi elikhulu yaziwa ngaphansi kwegama "oLwandle Pskov." Uma sikhuluma izindawo uphumule, ngaleso sikhathi kuqhubeke leli chibi inqwaba Cottages ukhululekile ethokomele lapho amaholide ukuza.
Omunye indawo enjalo kuyinto km 205 kuphela. kusukela Petersburg ukuzilibazisa isikhungo ngokuthi "Chud farmstead." Kukhona ngamashumi ayisihlanu Cottages kahle esimisiwe esesikhona iphelele impelasonto okuphumuzayo nomndeni wakho. Ngesikhathi sasehlobo, holidaymakers ngokuhlala kulezi zindawo, abalale lolwandle libalele futhi ujabulele ukubhukuda echibini, ebusika uyakhululeka i okugeza eyiqiniso isiRashiya, ahlale nabangane nganoma eziko, hamba Ukushushuluza, ukushushuluza noma snowmobiling.
In autumn ungakwazi udabule ehlathini kusesho amakhowe futhi amajikijolo, noma ugibele ibhayisekili. Iningi izindlu ezakhiwe ngokhuni baye landscaped ithala umbono echibini engapheli. Lapha ungakwazi uxoxe nabangani phezu kwakusihlwa, ujabulele ethule zemvelo bese ngiyolala endaweni evulekile, esongwe ngengubo yokulala efudumele.
Nakuba Chudskoe farmstead ngokuvakashela izivakashi unyaka wonke, bonke babe izinsuku ezithile lapho intengo cottage Okuqhashiwe ephakeme. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abaningi uhlela ngalesi sikhathi ukuphumula ezweni. Ngokwesibonelo, uma lokhu kwenzeka kuba ukuqasha cottage for uNcibijane futhi ezinsukwini ezilandelayo, ngamaholide ebusika. Futhi, kukhona kwatheleka amaholide ngesikhathi ezishisayo zasehlobo. Uma othile efuna ukumisa kanye nokuphumula kulezi zindawo kulokho okubizwa ngokuthi "izinsuku hot", kuyoba ukuhlakanipha ukuba ukuhlela ukuvakashelwa kusengaphambili futhi ukubhuka cottage kwesokudla. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ukuzilibazisa inikeza izivakashi izindlu ezincane kabani iqashwe kuyinto izindlu eshibhile nokuningi, yakhelwe yinkampani ebantwini abayishumi. Ngamunye wabo has konke okudingayo ukuze ukuhlala ukhululekile nokuningi.
Luxor Temple: incazelo kanye nezithombe
Amaholide e Hurghada - City of Eternal Sun
"Sunny Meadow": ukuphumula. Nezokungcebeleka isikhungo "Sunny Meadow": indawo kanye nezinzuzo
Tenerife, Adeje lokushisa kwamanzi, amahhotela, amabhishi, ukubuyekezwa
Likuphi Moore? Murom uVladimir esifundeni
Matyrskoe Reservoir incazelo, Ukudoba
Izimali kwezimali ku-akhawunti zamanje futhi ehhovisi inkampani
Indlebe lehla - indlela ukwenza ukukhetha okufanele
Seo-copywriting: Indlela Qeqesha Finder?
Shot ephansi emuva: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Isikrini ubuhle: Salvatore abafowethu abazalwane Winchester
Ukuqala kuyisimo sakho sokuzilibazisa? I-Fricassee yenkukhu - esinye isizathu sokuziqhenya
Umqoqi - ngubani? Ukusebenza njengomqoqi
Ukuzwakala komculo for computer, noma ukhethe inkinga
Umlingisi u-Alexei Anischenko: Filmography, biography, empilweni yakho
Pancake nhlama ebilisiwe: okungcono zokupheka
Amakhandlela Bheka "Buscopan": izici isicelo